तेस्रोलिंगी भूमिका श्रेष्ठको प्रश्न : सन्तान सुख नहुँदैमा हामी अप्राकृतिक ? - Ratopati
तेस्रोलिंगी भूमिका श्रेष्ठको प्रश्न : सन्तान सुख नहुँदैमा हामी अप्राकृतिक ?
‘सरकारले तेस्रोलिंगी, समलिंगीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ,’ तेस्रोलिंगी भूमिका श्रेष्ठले दाबी गरिन्, ‘हामीले नेपालको जनसंख्या नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याएका छौं ।’
महिला र पुरुषबीच बिहे हुन्छ । पुरातन मान्यता हो । बिहेपछि बालबच्चा जन्मन्छ । तेस्रोलिंगीबाट त्यो सम्भव छैन । ‘सन्तान सुख नहुँदैमा हामी अप्राकृतिक ?’ लिंगीय अल्पमतमा रहेकाको पक्षमा आवाज बुलन्द बनाउँदै आएकी श्रेष्ठले सोधिन्, ‘सन्तानसुख हुँदैमा प्राकृतिक हुने भए सरकारले कन्डम प्रमोसन किन गर्नुपर्यो । मुलुकको कुल जनसंख्यामध्ये महिला र पुरुष बहुसंख्यक छन् । तेस्रोलिंगी, समलिंगी कम छन् । बहुसंख्यक तेस्रोलिंगी, समलिंगी र महिला र पुरुष अल्पसंख्यक भए उनीहरू अप्राकृतिक हुन्थे होलान् । खै त हामीलाई बुझेको ?’
समस्याविनाको मानिस परिकल्पना गर्नसमेत सकिँदैन । मानिस समस्यै समस्याले जेलिएका छन् । त्यसबाट तेस्रोलिंगी अछुतो छैन । भन्नेले जे/जे भने पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले १९९० मे १९ मा तेस्रोलिंगीलाई अप्राकृतिक र रोगी होइनन् भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिंगी पनि प्राकृतिक हुन् भनेर फैसला गरिसकेको छ । र पनि, तेस्रोलिंगीलाई नेपाली समाजमा हेयको दृष्टिले हेरिन्छ ।
नीलहिरा समाज (तेस्रोलिंगी, समलिंगी र अन्तरलिंगीका संस्था) सँग जोडिँदासमेत नैकापनिवासी भूमिका श्रेष्ठ श्रेष्ठ लुकेरै हिँड्थिन् । भन्नेले छक्का, हिजडा, नपुंशक भन्न छाडेका थिएनन् ।
विविध कठिनाइबीच जीवन सार्थक बनाउन लागिपरेका तेस्रोलिंगीमध्ये भूमिका श्रेष्ठलाई धेरैले चिन्छन् । यौनिक अल्पसंख्यकहरूको सौदन्र्य प्रतियोगितामा मिस पिंकको ताज पहिरिँदा होस् वा कांग्रेसको १२औं महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्दा या समानुपाति सभासद्का लागि नाम सिफारिस हुँदा उनी चर्चामा रहिन् । केही समयअघि पोखरामा सम्पन्न तरुण दलको अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका दाबी गर्दा उनी सञ्चारमाध्यमा छाइन् ।
नीलहिरा समाज (तेस्रोलिंगी, समलिंगी र अन्तरलिंगीका संस्था) सँग जोडिँदासमेत नैकापनिवासी भूमिका श्रेष्ठ श्रेष्ठ लुकेरै हिँड्थिन् । भन्नेले छक्का, हिजडा, नपुंशक भन्न छाडेका थिएनन् । आफ्नोबारेमा आफैंलाई थाहा नभएको उनलाई छक्का, हिजडा, नपुंशकको शाब्दिक अर्थ थाहा थिएन । संस्थासँग जोडिएपछि धेरै कुरा सिकिन्, बुझिन् । आफूजस्तै साथी भेट्टाइन् । भूमिका जति चर्चामा छिन्, तेस्रोलिंगीको समस्या बाहिर आएको छैन । प्रस्तुत आलेखमा तेस्रोलिंगीको समस्याबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सात पास गरेकी उनलाई आठ कक्षा पुगेपछि शौचालय जान समस्या भयो । पुरुष शौचालय जान अप्ठ्यारो लाग्न थाल्यो । महिलाको शौचालय जाउँ खिसिट्युरी गर्ने डर । पुरुषकोमा जान अप्ठ्यारो लागे पनि उनले महिला शौचालय प्रयोग गर्न सकिनन् । दुवै शौचालय जान अप्ठ्यारो लागेपछि ‘टिफिन टाइम’ मा आफ्नै घरको शौचालय पुग्थिन् ।
समस्या नम्बर १
विविध समस्यासँग सिंगौरी खेल्दै उनले नौ कक्षा पास गरिन् । १० कक्षा पुगेपछि शिक्षक/शिक्षिका र विद्यार्थीले केटा भए पनि उनले देखाउने केटीको व्यवहार स्वीकारेनन् । तँलाई केटीजस्तो बन्न, मेकअप गर्न आउने सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन नआउने भनेर शिक्षिकाले झपार्थिन् ।
शिक्षकले समेत व्यवहार परिवर्तन गर भनेको भन्यै । पुरुष भएर पुरुषकै व्यवहार गरेनौ भने विद्यालय आउन नदिने संकेत गर्थे । तेस्रोलिंगी भूमिका श्रेष्ठले आफूले भोगेको विगत सुनाइन्, ‘सबैबाट दुव्र्यवहार भएपछि विद्यालय जानै छाडें ।’
समस्या नम्बर २
शारीरिकभन्दा मानसिक यातना पीडादायी हुन्छ । देख्नेले उनी घरबाट निस्कँदासमेत हाँसिदिन्थे । जिस्क्याउँथे । छक्का, हिँजडा, नपुंशक भन्थे । त्यसो भएपछि घरबाहिर निस्कन डर लाग्थ्यो । भनिन्, ‘निस्किहाल्दा ममी वा साथीसँग मात्रै । त्यतिबेला एक्लै निस्कने आँट गर्नै सक्थिनँ ।’
यतिसम्म कि उनलाई देख्नेले प्याट्टप्याट्ट पिटेर हिँड्थे । उनको घरबाट चोक पुग्न पाँच मिनेट लाग्थ्यो । छोटो बाटो प्रयोग गर्दा अरूले दुव्र्यवहार गर्ने भएकाले घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्थिन् । छिमेकीले मात्रै होइन, आफूलाई देख्नेले नजिस्क्याऊन्, नहाँसून् भनेर उनी पाँच मिनेटमै पुगिने चोक आधा घन्टा लगाएर घुमाउरो बाटो हिँड्थिन् । घरबाट निस्किहाल्दा साँझपखमात्रै । अधिकांश समय घरमै बस्ने उनले विद्यालय छाडेपछि पनि त्यस्तो समस्या भोग्न बाध्य भइन् ।
तेस्रोलिंगी भूमिका श्रेष्ठको नागरिकता संघर्ष जारी छ । श्रेष्ठले अहिलेसम्म दुईपटक नागरिकता लिइसकेकी छन् । पहिलोपटक लिएको नागरिकतामा कैलाश श्रेष्ठ उल्लेख भए पनि लिंग उल्लेख थिएन ।
समस्या नम्बर ३
उनलाई नागरिकताले दिनसम्म दुःख दियो । कैलाश श्रेष्ठकै नामबाट जारी सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) देखाएपछि ट्राफिकलाई सम्झाइबुझाइ गर्न कम्ती गाह्रो थिएन । नबुझेपछि झगडा पथ्र्यो भने कतिपय ट्राफिकले तेस्रोलिंगीबारे नबुझ्दा लाइसेन्स लिन्थे । लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिँदा जिस्क्याउने, अन्टसन्ट भन्नेको कमी थिएन । उनीहरूले त्यसो भन्दा उनले काठमाडौंबाट लाइसेन्स लिन सकिनन् । महिलाको भेषमा देखेका ट्राफिकले पुरुषको लाइसेन्स देख्दा अनावश्यक दुःख दिन्थे । पछिल्लोपटक लाइसेन्स नवीकरण गर्दा नाम कैलाश श्रेष्ठ उल्लेख भए पनि उनको पछिल्लो रूपरंग अर्थात् महिलाको फोटो राखेपछि समस्या झेल्नुपरेको छैन । उनले प्रस्ट्याइन्, ‘पछिल्लो समय मैले त्यस्तो समस्या भोग्न नपरे पनि तेस्रोलिंगीले लाइसेन्स पाउनै गाह्रो छ । पाइहाले पनि ट्राफिकले दुःख दिन छाडेको छैन । कतिपयले विनालाइसेन्स सवारीसाधन गुडाइरहेका छन् ।’
दोस्रोपटक कैलाश श्रेष्ठकै नामबाट नागरिकता जारी भए पनि लिंगमा ‘अन्य’ उल्लेख छ । दोस्रोपटक नागरिकता लिँदा उनले पुरुषकै भेषधारण गर्नुपरेको थियो । नागरिकता दिन राजी भएका अधिकारीले नाकको फुली फुकाल्न लगाए । ढाकाटोपी लगाएर फोटो खिच्नुस् भन्दा नाइँ भन्ने कुरै भएन । उनलाई ‘अन्य’ उल्लेख भएको नागरिकता लिनु नै थियो ।
तर, उनी भूमिका श्रेष्ठबाटै नागरिकता लिन चाहन्छिन् । महिना दिनअघि सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिंगीको नामअनुसार नागरिकता देऊ भनेको छ । उनी आफ्नै नामबाट नागरिकता लिने पर्खाइमा छिन् ।
समस्या नम्बर ४
तेस्रोलिंगीले काठमाडौंमा कोठा पाउन गाह्रो छ । तेस्रोलिंगी भनेपछि अप्राकृतिक भनेर बुझेका छन् । राम्रो दृष्टिले हेरिँदैन । कोठा पाइहाले पनि तीन हजार रुपैयाँमा पाइने त्यही एउटा कोठालाई १० हजार भनिन्छ ।
पाँच हजारमा बसिरहेका तेस्रोलिंगीलाई गोरखा भूकम्पपछि त्यही कोठाको भाडा दोब्बर बढाइएको थियो । छाडेर गए अर्को कोठा पाउन गाह्रो भएपछि तोकिएको भाडा नतिरी सुख छैन । त्यतिमात्रै होइन, महिना पुग्नसाथ भाडा बुझाए पनि घरभेटीले बसिरहेको कोठा जबरजस्ती छाड्न लगाउँछन् । भूमिकाले दुःख व्यक्त गरिन्, ‘म आफ्नै घरमा बस्दै आएकीले त्यस्तो समस्या भोग्न परेको छैन । तर, तेस्रोलिंगीले हिजोआजसमेत यस्तो समस्याबाट गुज्रन परेको छ । कतिपय अवस्थामा पुलिस केससमेत हुने गरेको छ ।’
समस्या नम्बर ५
पछिल्लो समय तेस्रोलिंगी र समलिंगीबारे नेपाली समाज अनभिज्ञ छैन । तर पनि, तेस्रोलिंगी र समलिंगी समस्याको पहाड बनेका छन् । घरपरिवारलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती बिहे गरिदिने गरेका छन् । त्यसले स्थायित्व पाउँदैन । जबरजस्ती बिहे गरिदिएपछि तेस्रोलिंगीले ‘डिभोर्स’ त हुने नै भयो उनीरूले आत्महत्यासमेत गर्ने गर्छन् । कतिपयले अनाहक ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
तेस्रोलिंगी र समलिंगीले बिहे गर्न पाउने अधिकारबारे कानुनले बोलेको छैन । त्यो पनि त जटिल समस्या हो । तेस्रोलिंगी र समलिंगीले गुपचुमै बिहे गर्ने नभएका होइनन् । गुपचुपमा बिहे गर्नु पनि त समस्या हो ।
‘कोही केटा मसँग रिलेसनसिपमा भए पनि म बुहारी बनेर उसको घर भित्रिन सक्दिनँ,’ भूमिकाले आफ्नो समुदायको समस्याबारे जानकारी गराइन्, ‘बाहिरै लुकेर बस्नुपर्छ ।
समस्या नम्बर ६
‘कोही केटा मसँग रिलेसनसिपमा भए पनि म बुहारी बनेर उसको घर भित्रिन सक्दिनँ,’ भूमिकाले आफ्नो समुदायको समस्याबारे जानकारी गराइन्, ‘बाहिरै लुकेर बस्नुपर्छ । कसैलाई थाहा पाउलान् भनेर डरसरि बाँच्नुपर्छ । हामीबाट सन्तानसुख सम्भव छैन । हामीसँग बिहे गर्नेले पनि छक्कासँग लागेको भनेर दुव्र्यवहार भोग्नुपर्छ ।’ अन्त्यमा तेस्रोलिंगी एक्लै बाँच्नुपर्छ । उसको आफ्नो भन्ने कोही हुँदैनन् ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका तेस्रोलिंगी समस्या झन् चर्को छ । उनीहरू काठमाडौंमा सजिलै बस्न सक्छन् । तर, घर फर्कंदा पुरुष भएरै जानुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूको वास्तविकता नबुझिदिँदा घरकाले नै उनीहरूलाई घरबाट निकालिदिने गरेका छन् ।
तेस्रोलिंगीलाई रोजगारीको समस्या छ । काम पाइहाले पनि तबल पाउँदैनन् । काम गरेबापत तबल नपाउँदा रोजगारीको अर्थ हुँदैन ।
योग्यता भएका तेस्रोलिंगीले सरकारी जागिरका लागि फाराम भर्न पाउँदैनथे । उनीहरूले गत वर्षदेखि मात्रै सरकारी जागिर तयारीका लागि ढोका खुलेको हो । काम पाउन गाह्रो भएपछि तेस्रोलिंगीले सीपमूलक तालिम लिएर आत्मनिर्भरको बाटो अँगालेका छन् । कतिपयले मेकअप आर्टिस्ट भएर काम थालेका छन् । कतिपयले मोडलिङ गर्दै आएका छन् । कतिपयले चलचित्रमा अभिनय गरे पनि अधिकांश समस्यामा छन् ।